काठमाडौं । उद्योगी पवन गोल्याणले कृषि र उद्योग क्षेत्रका लागि सर्वाधिक राम्रो बजेट आएको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको बजेटले कृषि र उद्योग क्षेत्रमा व्यापक सुधार सम्भव भएको बताए । ‘बजेटले उद्योग र कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक सबै कुरा दिएको छ, यसले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ’, उद्योगी गोल्याणले भने ।
कृषि उपजहरुको भण्डार गृह निर्माणका लागि ठूलो बजेट आएको छ । कृषि उपजहरुको आयातमा भन्सार दर पनि बढाइएको छ । युवाहरुलाई शिपसँग जोड्ने भनेको छ । सबै स्थानीय तहमा एक कृषि विज्ञ राख्ने कुरा पनि राम्रो छ । कृषिमा जे जे कुरा आएका छन्, ति सबै कुराले अबको दिन उज्वल हुन्छ भन्ने संकेत गरेको छ । वन पैदावरको उपयोगको विषय पनि समेटिएको छ जसले एक खर्बको आयात घटाउनेछ ।
उद्योगमा पनि कच्चा पदार्थको भन्सार एक तह कम कायम गर्ने व्यवस्था आयो । यसले आन्तरिक उद्योगहरुको प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउन सहयोग गर्छ । स्वदेशी उद्योगीहरुको संरक्षण गर्छ । घरेलु तथा साना उद्योगीहरुलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने कुरा पनि राम्रो छ ।
धागो र कपडा उद्योग माग पनि समेटिएको छ । बजेटले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बलियो र चलायमान बनाउँछ । नेपालको अर्थतन्त्र आयातमूखिबाट औद्योगीकरणमा जाने सोँच यो बजेटले देखाएको छ । डा. युवराज खतिवडाको तेश्रो बजेट हो र यो अन्य दुई भन्दा उत्कृष्ठ छ । –गोल्याण समुहका अध्यक्ष गोल्याणसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
https://www.corporatenepal.com/2020/05/182589/ १५ जेष्ठ २०७७, बिहीबार
'भ्याटको दर १० प्रतिशतमा झारौं, आयकर पनि २० प्रतिशत घटाऔं'
‘दुई खर्बको नोक्सानी भैसक्यो, लकडाउनकै बीच आर्थिक गतिविधि अघि बढाउने सोच बनाएका छौँ’
बजेटमा रोजगारी वृद्धि र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सुझाव
लकडाउनकै बीच अर्थतन्त्रलाई क्रमशः चलायमान बनाइने छः अर्थमन्त्री
सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कृषि क्षेत्र उकास्न तयारः मन्त्री भुसाल
परिसंघले अर्थमन्त्रीलाई दियो सुझाव, 'कृषिमा लगानी बढाउन १० वर्ष आयकर छुट दिनुहोस्'